Qabbeenya Alagaan Qabachuuf Hawwu - Caboowanci.com-Oromia
December 7, 2018 December 7, 2018 Nadhani	0 Comments Africa, Ethiopia, OBS, OLF, OMN, Oromo
Hardha Nama Faarsanii Boru Moo Diina Ta´uu Haadhabatuu!
Ani akka namadhuunfaa tokkooti yeroon taa´ee ilaaluu, bu´aan Dhiigni Ilmaan Oromoo akka bishaanitti gad lolaa´aa tureefi gad nam´aa ture,Lafeen Ilmaan Oromoo caccabaa ture, Samuun Ummata Oromoo HundaaToorchii ta´aa ture, Qaaminni Ilmaan Oromoo mana Hidhaa keessati cicitaa ture akkasumas Qabeenyii Ilmaan Oromoo Samamaa kan ture sunhundaa Hardha bu´aa Guddaa buuseefii jira Ummata hardha Lubuunjiruufi.
Dr. Abiy fi ObbooLammaa hardha kan asiin gahee Qeerroo ykn qabissoo garagaraa godhameesana. Garuu moo namoonni danuun hin beekne malee harka lafajalaatiin qabissoo dhumma sanaayyuu kan gochaa turef dhiibaa gochaaturuun isaani beekamaadha. Kana jechuun fedheefi quuqama saba isaniittif qaban kan agarisiisuudha. Otuu akkas ta´uu baatee OPDOnwagaa 26/7 Oromootti hin Xabachiifitu ture.
Namoonni tokko tokkos komii qabaniifi akka ragaatti dhiheefatan, hardhas OPDOdurittu jiraadha. Egaa akka natti fakkaatutti Stratege diinaa yknAddeemisa diinaa baruufi kayyoo diinaa baruufi moo irraa baqataniiotuu hin taannee itti dhihaatanii Diina sana fira godhatanii Kiyyoodiinni qopheesse sana baratani itti qophaa´aani irraa aanuu malee,ati Diina kooti jettee yoo ofi irrati beekisifittee yeroodhuma sanasi ajjeesa jechaadha akkuma gochaa turan. Kanaafi nati fakkaata ObbooLammaafi Dr. Abiy OPDOs ta´anii Hardha kinnoo bilisa baanee jira,Bilisa kana moo itti fayyadamuufi dhiisuun harka keenya keessa jira.Dirqaba hardhuma kana Walabummaa Oromia jennee awwajuufi (Declaration) ykn gochuufi Diina ofitti bayyisuu ta´a malee Faayidaatokko illee hin qabu. Hardha akkuma enyuu beeku ykn isaanu jedhanHarka qullaa jirti Oromoon, Maalaqinni Bank keessa hin jiru, HuminnaWaraana hin jabeefanne, Qabeenyaan Oromoo hin jabeesinne, kkf hundaakeessati addeemissa hin taane deemuun rakkoo nutti fida. Akkasumasyaalamee waan dadhabameef natti fakkaata Kanaafi jara kana(Qabbeenya Alagaan Qabachuuf Hawwu) itti fayyadamuun bayyeebarbachisaafi dirqama akkasumas gamnumaadha. Rabbi isintti haaagarisiisu, Enyuu keenyaa yoo ta´ee, Obboo Lammas ta´ee Dr. Abiy,Jawar…etc, Input OLF itti. YKN OLF jalatti kan gudfamaniidha. OLF hin jaalatan ykn hin deegaran jechuun hin danda´amuu 100%. Kanaafjara kana ABO irraa addaan baafinnee ilaaluu hin qabnu. Kaayyoo ganamaa sana galmaan gahamuun ni danda´ama addeemsa amma jalqabameen.
Rabbi isinitti haaagarisiisu, asi irrati Qabissoo Oromoo enyuun deemaa jiru xiqqeesuufimitti garuu yeoo gabaaba keessati Oromoo qaqabuu jechuun salphaamitti. Waldaa Qorannoo Oromoo ilaala mee, gabasinni Isaan Qopheessaaturan, du´aati Oromoo toko illee hin dhaabinne yeroo sanatti,Diplomaasiin godhamaa ture, Du´aatii Oromoo dhaabee hin ture,Qabsoon wagaa 120 ol tures dhaabuu hin dandeenye. Kana qofa mitti waan danuutu jira. Waanni biraa moo waan hiraanfachuu hin qabinne tokko moo qabissoo kana kan Onnee itti godhee jarreen kana ykn dhaabakamuu mitti. Yeroo dha, yeroon kun 21 Century. Bar kun bara Information fi Technology dha. Enyuuyyuu kan ofi beeku mirga isaaffalmachuu danda´uu, wal kakaasuu fi wal damakisuu danda´uu ta´eetimalee Qabissoon kun koo qofa jennee Ummata itti qoodinnu mitti.
Kanaaf jecha yeroo ammaa kanatti diina ofitti bayyisuun karaa dheera nutti fudhata,otuu mirgi nama biraas hin tuqaminne akkasumas biyyi sun kanijjaaraminne waan Oromoo irrati waan ta´eef hardha lafaa kaateeyeroodhuma tokko waan Oromoo tokko deebisiisuuf yoo kaatee mirgiikeenyaa tuqameera jedhanii diina ta´uuf deemu. Kanaafi moo Suutumajecha tokko tokkoon jalqabamee 100n 100itti harka ofii jala galchuunni danda´ama.
Enyeen siriidha akka mootummati, waan sireesuu qabu danuuttu jira. Kan dhimmi Finfinne hin furaminne, kalleessa Oromyaa keessati angoo ofii itti fayyadamanii Oromoo ajjeechisaa turan fi Samisiisaa turan, hardhas nagaa dhumaan jiraachaa jiru. Ammas Oromoo meeqa meeqatu mana hidhaa keessa jira otuu wari angoo qaban nagaan jiraachaa otuu jiranuu. Darbeesi mooqoranoon Midrook Itiyyophiyya qoratamuu hin jalqabaminne. QabeenyaaOromoo Warqii Oromoo fi Albuuda Oromoo kan saama ture dha. AkkasumasWarshaalota meeqaa meeqatu Keemikaala isaa laga naminiif horiin ittifayyadamanitti gad nami´ee Lubuu namaa fi horii galaafachaa jira.
Dhuma irratti Paartileen Oromoo tokko ta´ee Oromia barbannu sana qabaachuuf abdii qaba. Partiin enyuutti jibbuufi maqaa hin taanee itti mogaasuun kanyeroon irra darbee beekuunis barbachisaa dha. Kun hundaa fooyya´ameehaala itti barbannu ta´uuf hundaa isaa obsaan eguun barbachissaadha. Dhugaa dhumatti jarreen kun Oromoof hojjachuuf namoota Lubuuofii keeneedha. Akka gaariitti itti fayyadamuufi kunuunisuun kankenya hundaati. Rakkoon hin jiru jechaa mitti. Lubuun du´aa hin jirujechaa mitti. Garuu moo hardha Oromoon angoo qabatee jennee Sababiraa midhaa yoo irraan geenya ta´ee kalleessayyuu otuu du´aa jiruumaqaan keenyaa balleessuuf kan irriba dhaban danuutu jira. Kanajechuunis Lammii Ofi eegachuu dhabuunis barbachisaa mitti. Ummata Milliyyon 100 ol jiru keessati mootummaan bakka hundaa dafee qaqabajechuunis rakkisaadha. Kanaaf kalleessa irra hardha nuuf wayya. Wayyaqofa mitti harka keenya keessa jira. Itti fayyadamuun beekun barbachissadha. Oromoo keessa fakkeesituu meqaa fi meeqatu jira.Hardha si fakkaatti Boru moo nama biraa fakkaatti. Hardha ol sikaasitteetuma si tulitti Boru moo ol fuutee dhagaa irrati sidarbatti. Haala akkasii kana enyuufuu sirii mitti. Obsaan addeemisajiru beekuun barbachisaa dha.
Kaayyoo mootummaas 100% Ummatatti himuu dhiisuun ni mala, Uummani kenyaa moo hardhuma kanaOromiyaa Walaboomiteefi Oromiyaa addaan citte jedhamee akka lalabamu barbaada. Kana namuu hin jibbu. Akkuman armaan olitti ibsuufyaalletti suuta qaqaba, addeemissa keessa ta´a garuu waan Mootummaa irraa hin dhageenyeef jechaa rakkoo umuu hin qabun jedhee nyaada.
← Gurgurtaa Websaayitii kanaa